သူခေါ်ရင် လာပါ . . လာပါ . .
1546 days ago	(http://mmastrology.myanmarbloggers.org)
" အဲဒီလိုလုပ်ရင် ပြောင်းပြန်ကြီး အိမ်ထဲဝင်လာမှာလား ဟင် . ."" ပက်လက်ကြီး လျှာထုတ်ပြီး ၀င်လာမယ် . ."၁၂.၁၀.၂၀၀၈ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅း၃၀ မိနစ် သူရဇ္ဖအချိန်" ဆရာ တခွန်းပဲမေးမယ် ဖြေပါနော် . . . ရည်းစားအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာ ပြန်လာဦးမှာလား။"" စိတ်လေတ	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Add to: " ပက်လက်ကြီး လျှာထုတ်ပြီး ၀င်လာမယ် . ."၁၂.၁၀.၂၀၀၈ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅း၃၀ မိနစ် သူရဇ္ဖအချိန်" ဆရာ တခွန်းပဲမေးမယ် ဖြေပါနော် . . . ရည်းစားအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာ ပြန်လာဦးမှာလား။"" စိတ်လေတ">
1546 days ago	(http://feedproxy.google.com)
ပုဂံ နေ့လည် ခင်း--------နတ်သမီး ကမ်းပါး တနေရာ---သူရှေ့ ကနေ အမြန်ပြေး သွားပြီး ကျမကို လိုက်ခဲ့ပါ တဲ့--သူရှိရာဆီ ကျမ လျှောက် သွား သော အခါ--အဝေး က နေ--ကျမအား-- ဓါတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ် ရိုက်နေသည်မှာ သူ့နား ရောက် လာသည် အထိ-သူ ကျမ လျှောက်လာ သည်ကို ငေးမောစွာ ကြည့်ရင်းပြောသည်။မ-ရယ်--အြ	read more » Discuss Add this link to... Bury
1547 days ago	(http://feedproxy.google.com)
With the ease of development & multi-platform support, Adobe AIR isagetting-popular choice for creating desktop applications.There are many beautiful applications built with it including the ones that are functional for the designer & developer community.Months ago,apost pub	read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar Sexy Model, Moe Hay Ko will not be onastage during Thingyan in Yangon
1547 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Myanmar Model and Actress, Moe Hay Ko	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Model and Actress, Moe Hay Ko">
Customizable jQuery Virtual Keypad Plugin
1548 days ago	(http://feedproxy.google.com)
jQuery Keypad isaplugin for creating more secure input entry by providingakeyboard like interface.The values to be displayed can be easily set which makes it possible to show only numbers, foreign letters, etc.The keypad can be displayed with various animations like "fade read more » Discuss Add this link to... Bury
1547 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
မင်္ဂလာပါရှင်..သမီးလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးများနဲ့ ငံပြာရည်ချက်လိုက်ပါတယ်နော်. :Dဆားချက်တာတွေများနေလို့ ငံပြာရည်ပဲချက်လိုက်တာပါ.*************************************၂၀၀၅ ခုနှစ်..ဂျပန်ရောက်စသမီးလေး ကျောင်းမနေရသေးတော့ ကွန်ပြူတာဆော့နေတာလေ..း)သမီးလေးက မွေးခါစက ဆံပင်ပါးပါးလေးရယ်.. ယောင်္ကျားလေးနဲ့တူတယ်လေ. ဂတုံးလေ	read more » Discuss Add this link to... Bury
ခုရက်ပိုင်း၊ ခုတလော၊ လောလောဆယ်....
1547 days ago	(http://www.artsof-greengirl.com)
အားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာ ပျင်းပျင်းနဲ့ ဟိုကလစ် ဒီကလစ် လုပ်ရင်း သူများအိမ်တွေ လျှောက်ကြည့်မိပေမယ့် ခြေရာလက်ရာတော့ မချန်မိတာများနေတယ်။ ဘာတွေတွေ့သလဲပြောရရင် ၀ါသနာတွေလည်း တွေ့တယ်။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ တွေ့ကြုံရတဲ့ အကောင်းအဆိုး၊ စိတ်ခံစားချက် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတို့ကို ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ရင်ဖွင့်စာတွေလည်း တွေ့တယ်။ ခု	read more » Discuss Add this link to... Bury
စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များကို ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း
1547 days ago	(http://health.ngoinmyanmar.org)
ဆေးပညာလောကမှာ ကျင့်သုံးတဲ့ သမားကျင့်ဝတ်ဝိနည်း (Medical Ethics) တွေဟာ အနောက်တိုင်း တွေးခေါ် ဒဿနပညာကို အခြေခံပြီး၊ လူနာဖက်က ရပ်တည်ပါတယ်။အဓိက သမားကျင့်ဝတ်ဝိနည်း လေးသွယ် (Four Principles of Medical Ethics) ကတော့၁။ လူနာ၏ ကောင်းကျိုးကို ရှေးရှုခြင်း (Beneficence/ Do good) read more » Discuss Add this link to... Bury